Maadheelee Dhangii Maallaqaa
Galmeelee LibreOffice Calc waljijjiiruun gara hubannoo dhoowwuutti, yoo galmeen LibreOffice Calc kee fayyadamaa kan dhangii maallaqaa adda ta'e fayyadamuun fe'ame geessuu danda'a.
LibreOffice Calc keessatti akka lakkoofsi ati akka "1,234.50 €" tti dhangeessitee turte ammayyuu biyya biraa keessatti Euru dhaan hafuu fi doolara akka hin taane qindeessuu dandeessa.
Dhangii maallaqaa qaaqa Man'eelee Dhangeessi keessatti qindaa'inoota biyyaa lamaan(caancala Dhangii - Man'eelee - Lakkoofsota filadhu) jijjiiruu dandeessa. Sanduuqa makaa Afaan keessatti qindaa'ina bu'uuraa mallattoo mallaqaaf, addaan baastota deesiimaalii fi kumaatiif filadhu. Sanduuqa tarree Dhangii keessatti jijjiiramoota danda'aman dhangii durtii irraa afaaniif filachuu dandeessa.
Fakkeenyaaf, yoo afaan "Durtii" ta'ee kaa'amee fi qindaa'ina gitoo biyyaa jermanii fayyadamaa jiraatte, dhangiin maallaqaa "1.234,00 €" ta'a. Tuqaan fuuldura dijiitii kumaa yoo fayyadu qoodduun bakkeewwan deesiimaalii fuuldura fayyada. Yoo amma dhangii maallaqaa hirkataa "$ English (US)" sanduuqa tarree Dhangii irraa filatte, dhangii armaan gadii argatta:"$ 1.234,00". Akkuma argitutti, addaan baastotni sanuma ta'u. Mallatoo maallaqaa qofatu jijjiiramee ture, ta'us dhangiin bu'uuraa sirnasxaa akkauma qindaa'ina gitoo biyyaa sanuma ta'a.
Yoo, Afaan jalatti, man'eelee gara "English (US)" jijjiirte, qindaa'inni gitoo biyyaa afaan Ingilizii ni dabarsamee dhangiin maallaqaa durtii amma "$ 1,234.00" ta'a.
Title is: Maadheelee Dhangii Maallaqaa